May 22, 2020 - Lupyo News
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး …
May 22, 2020 by Lupyo News
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထတုန်းဆိုတဲ့ ဦးလေးကြီး .. ဦးဆိုရင် ကြောက်နေရသည် …. ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်တာ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ မနေ့ကမှ ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတော့ ကျုပ် ပျော်သွားတယ်…။ “ဦး” “ပြော ခလိန်း” “ဦး ပျော်လို့ရပြီ သိလား” ချိန်းတွေ့တော့မယ် ထင်တယ်လို့ တွေးမိပြီး ကျုပ် ပီတိတွေ ဖျာနေမိတယ် … ။ “အွန်း ဘာလို့လဲ” “ခလိန်းမှာ ဦးနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလေ” “ဖူးးးးးး ” သောက်နေတဲ့ ကော်ဖီတောင် ပါးစပ်က ပြန်ထွက်ကုန်တယ်။ လခွမ်းမှပဲ။ “ဟဲ့ နေပါဦး ခလိန်း ဘာပြော” “ခလိန်းမှာ ဦး … Read more
ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ၂၁ နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး News.AU မှ ဖော်ပြချက်အရ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ဦးမှာ ခေါင်းကိုက်ကိုက်နဲ့ ညအိပ်ယာဝင်သွားခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုပြီး ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုးကားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။UK, Gateshead မှာ မိခင်နဲ့အတူတူနေထိုင်နေတဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး Jessica Cain ပါ။ သူမဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတုန်းက ရုတ်တရက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ မသေဆုံးခင်ညတုန်းက Jessica ဟာ မိခင်ကိုခေါင်းကိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ပါရာစီတမောတောင်းသောက်ကာ အိပ်ယာစောစောဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်ကျတော့ မိခင်ဖြစ်သူက သမီးလေးသက်သာလားမေးမလို့ သွားနှိုးခဲ့ပေမယ့် Jessica ပြန်မထူးခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်လောက်လှုပ်နှိုးနှိုး မျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်မလောတဲ့ Jessica ရဲ့အခြေအနေကို မိခင်ခင်ဗျာခေါင်းနားပမ်းကြီးကာ စိုးရိမ်လာစပြုနေခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် … Read more
အနမ်းမိုးတွေရွာရင်း တံတားပေါ်က အားလွန်ပြုတ်ကျတဲ့ စုံတွဲရဲ့အဖြစ်ဆိုး
အနမ်းမိုးတွေရွာရင်း တံတားပေါ်က အားလွန်ပြုတ်ကျတဲ့ စုံတွဲရဲ့အဖြစ်ဆိုး ပီရူးနိုင်ငံက စုံတွဲတစ်တွဲဟာ တံတားတစ်ခုပေါ်မှာ အနမ်းတွေဖလှယ်ခဲ့ရာ၊ အားလွန်ပြုတ်ကျပြီး နှစ်ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူတို နာမည်တွေကတော့ Maybeth Espinoz (၃၄)နှစ်နဲ့၊ Hector Vidal (၃၆)နှစ်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ Cusco မြို့က Bethlehem တံတားမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့စုံတွဲဟာ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကို အပြည့်အဝ ဖော်ကျူးဖို့ အနမ်းတွေ အပြန်အလှန် ဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Maybeth ဟာ အမျိုးသမီးတို့ ထုံးစံအတိုင်း ချစ်သူကို ကားယားခွထားပါတယ်။ ဒီအချက်ကပဲ ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်တဲ့အခါမှာ နှစ်ဦးစလုံး အောက်ကို ပြုတ်ကျသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ မနက် (၁)နာရီမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တံတားက ကုန်းကျော်တံတားဖြစ်ပုံရပြီး၊ အောက်မှာ ကားတွေ သွားလာနေတာကို … Read more
“တစ်ခါဖောက်ပြန်ဖူးရင် တစ်သက်လုံး ဖောက်ပြန်လေ့ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ”
“တစ်ခါဖောက်ပြန်ဖူးရင် တစ်သက်လုံး ဖောက်ပြန်လေ့ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ” မြန်မာစကားမှာတော့ ခြံခုန်တယ်၊ စနိုက်ကျော်တယ် စသဖြင့် သုံးနှုန်းလေ့ ရှိတဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ ကိစ္စဟာ လူတွေ အရိုးစွဲ ယုံကြည် လာခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ တစ်ကြိမ် လုပ်ဖူးရင် တစ်သက် စာဖောက်ပြန် တတ်ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာတွေ့ရှိ ခဲ့ပါတာ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အချစ်ရေးမှာ သစ္စာမဲ့တဲ့ သူတွေဟာ ရှေ့လူတစ်ယောက် နဲ့တွဲရင်း ဖောက်ပြန်တတ်ရင် နောက်လူတစ်ယောက်နဲ့တွဲလဲ ဖောက်ပြန် ဦးမယ် ဆိုတာ အမှန်တရားဖြစ်ကြောင်း Archives of Sexual Behaviour မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိ ချက် အရ အတိအကျ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအပေါ်မှာတော့ လူတွေရဲ့အမြင်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေဦး မှာဖြစ်ပေမယ့် … Read more
(၈)လအရွယ် ခလေးငယ်ကို ဖခင်ဖြစ်သူမှ ရေနစ်သတ်မှုဖြစ်ပွား ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့သဃ်န်းညီနောင်ရွာသစ်(901)ဝန်းဘေး မေလ ၂၁ရက် ည(8:30pm)အချိန်က(၈)လခန့်ရှိ သမီးဖြစ်သူ ပွင့်နဒီထက်အား ဖခင်​​ဖြစ်သူမှရေနစ်သတ်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အကြောင်းကြားလာသဖြင့် သဃ်န်းညီနောင် မြို့သစ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ထွက်ခွာကာ လိုအပ်တာများ ပြုလုပ်ပီး မြဝတီဆေးရုံကြီးရင်ခွဲရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ ပါသည်ဟု ဆိုပါတယ်။ “တရားဓမ္မနှင့် ရသစာပေ အားနည်းလာရင် ယခုလိုမကြားဝံ့မနာသာ ပြစ်မှုမျိုးတွေကို လူများကျူးလွန်လာတတ်၏” နေနော်(မြဝတီ)သတင်းကိုးကား….SettPaingAung —————————— Unicode (၈)လအရှယျ ခလေးငယျကို ဖခငျဖွဈသူမှ ရနေဈသတျမှုဖွဈပှား ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့သဃျနျးညီနောငျရှာသဈ(901)ဝနျးဘေး မလေ ၂၁ရကျ ည(8:30pm)အခြိနျက(၈)လခနျ့ရှိ သမီးဖွဈသူ ပှငျ့နဒီထကျအား ဖခငျဖွဈသူမှရနေဈသတျမှု ဖွဈပှားကွောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါ ဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ အကွောငျးကွားလာသဖွငျ့ သဃျနျးညီနောငျ မွို့သဈလူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့မှ ထှကျခှာကာ … Read more
ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်းပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတဲ့ မိန်းကလေးဆိုပြီး အထင်သေးတော့မလို့လား? အဓိပါယ်ရှိတဲ့စာ အနှစ်ရှိတဲ့စာ စိတ်ဝင်စားမှု့မရှိလည်း နဲနဲလေးဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ `တန်ဖိုးမထားပေးနိုင်ရင်တောင် လေးစားပါ…!´ ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်းပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတဲ့ မိန်းကလေးဆိုပြီး အထင်သေးတော့မလို့လား? – မဟုတ်သေးဘူးနော်… သူ့ကို လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိရက်လောက်အောင် တန်ဖိုးထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်တော့ သူ့မှာ ရှိနေနိုင်တယ်လေ။ -အတော်များများ မလုပ်ချင်တဲ့ စားပွဲထိုးအလုပ်ကို လုပ်နေရတဲ့ ကောင်လေးဆိုပြီး နိုင်ထက်စီးနင်းဆက်ဆံတော့မလို့လား? – မဟုတ်သေးဘူးနော်…သူ့အတွက် ဘေးမသီ ရန်မခဖို့ နေ့စဉ် ဘုရားမှာဆုတောင်းပေးနေတဲ့ အမေတစ်ယောက်တော့ သူ့မှာ ရှိနေနိုင်တယ်လေ။ – သူများတကာအိမ်မှာ အိမ်အကူလုပ်နေရတဲ့ အိမ်ဖော်မိန်းကလေးဆိုပြီး အနိုင်ကျင့်တော့မလို့လား? – မဟုတ်သေးဘူးနော်…သူပြန်ပို့တဲ့ လုပ်အားခနဲ့ ပညာသင်ပြီး တစ်နေ့မှာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မောင်နှမတွေ သူ့မှာ ရှိနေနိုင်တယ်လေ။ – လူတကာ အသက်အောင့်ပြီး … Read more
အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရသော ဒေါက်တာ လဲ့လဲ့မော် စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၃၀ ချမှတ်သည့်အပြင် စတုတ္ထအမှုအတွက် နေအိမ်ပါအသိမ်းခံရ အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့ ဒေါက်တာ လဲ့လဲ့မော် ပထမအမှုသုံးခုအတွက် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါပြီ Friday, May 22, 2020 အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်း ခံထားရသော တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော် အား ပထမ အမှု သုံးခု အတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်စီ ကျခံရန် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တရားရုံးက အမိန့် ချမှတ်လိုက်သည်။ ပထမ အမှု လမ်းဦးစီးသို့ ဘဏ္ဍာငွေ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းချပေးမှုနှင့် ခြံစည်းရိုးကာရံမှု၊ ဒုတိယ အမှု လေယာဉ်ကွင်း ခြုံရှင်းသည့် အမှု နှင့် တတိယ အမှု GGS သဘာဝဓာတ်ငွေ့ … Read more
အဖေကို သေအောင်လုပ်ပီး အမေကို ရောဂါရအောင်လုပ်တဲ့ စုန်းမ(ရုပ်သံ)
အဖေကို သေအောင်လုပ်ပီး အမေကို ရောဂါရအောင်လုပ်တဲ့ စုန်းမ(ရုပ်သံ) ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေကို မယုံကြည်ရင်တောင် မစော်ကားနဲ့လို့ ရှေးလူကြီးတွေပြောတာ ကြားမိပါတယ် လောကကြီးမှာ ၃၁ ဘုံရှိပြီး အဲဒီဘုံထဲမှာ ကောင်းတာတွေလည်းပါသလို မကောင်းတဲ့ ဘုံဘဝက သတ္တဝါတွေလည်းရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြားဖူးနားဝရှိနေတဲ့ နာမည်ကတော့ ” စုန်း ”ပါ သီတင်းကျွတ်ညမှာဆို စုန်း မီးတောက်တယ်ဆိုပြီး ညသန်းခေါင်အချိန်ထိ ရွာအပြင်မှာ ထွက်ကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ် အမေကို ရောဂါရအောင်လုပ်နေတဲ့ စုန်းမကို ဆရာက ပညာပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ပညာတတ်တဲ့ ဆရာတွေရဲ့ အမိန့်တစ်ခွန်း စကားတစ်ခွန်းဟာ မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝက သတ္တဝါတွေကို နှိမ်နင်းနိုင်ပါတယ် သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေကို မယုံကြည့်ပေမယ့် မစော်ကားမိဖို့လည်းသတိပေးပါရစေနော် ချစ်လို့ပဲဖြစ်စေ မုန်းလို့ပဲဖြစ်စေ ပြုစားတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်။ crd —————————- Unicode ပရိသတျကွီးခငျဗြာ … Read more
ဘေးအခန်းက လင်မယားစုံတွဲကို ချောင်းကြည့်မိတဲ့ လူပျိုကြီးရဲ့ အဖြစ်…
ဘေးအခန်းက အသံ ကြားလို့ လင်မယားစုံတွဲကို ချောင်းကြည့်မိတဲ့ လူပျိုကြီးရဲ့ အဖြစ်… ဘေးအခန်းက လင်မယားစုံတွဲကို ချောင်းကြည့်မိတဲ့ လူပျိုကြီးရဲ့ အဖြစ်… ဘေးအခန်းကလင်မယားစကားပြောသံကိုနားမထောင်ချင်လည်းကြားနေရသည်…။ “မိန်းမမင်းကုန်းပေးရမဲ့အလှည့်”“ဟာ..ဒီမှာ အရမ်းအိပ်ချင်နေတာကို“အိပ်ချင်တာ..အသာထား..ထပြီးကုန်းပေးစမ်းပါကွာ..” “သြော်..မနက်ကလည်းကျမကုန်းပေးပြီးပြီ..ခုလည်းကျမပဲ..ကုန်းပေးရဦးမှာလား..”“အေးလေမင်းပဲကုန်းပေးရမှာပေါ့..” “တောက်စ်..ဒီလိုမှန်းသိရင်..ယောင်္ကျားမယူခဲ့ပါဘူး..တော်….။ ”ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်အသံများကြားနေရသည်…။ ရုပ်လေးပါမြင်ရရင်ပိုပီး အရသာရှိမည်- မထူးဘူး လူ့လက်တစ်ရပ်သာသာ အုတ်နံရံကို တောက်တက်လိုတွယ်ကပ်တက်ပီး အပေါ်စီးကချောင်းမည့်အကြံဖြင့် …။ လွယ်တော့မလွယ် အင်မတန်မက်မောလွန်းလို့သာ ကုတ်ကပ်တက်ရသည်… ပြုတ်ကျလျှင် မသာပေါ်နိုင်သည်..။အနည်းဆုံးတော့ ကျိုးပဲ့သွားနိုင်သည်။ တွေဝေနေစဉ်မှာပင် ” မိန်းမ မနက်ကလိုအရည်လည်းမထွက်ဘူး” ” ယွကျား တစ်နေတယ်” မထူးပါဘူးကွာ ခုံတေဆင့်နေရင် ကောင်းခန်းတွေလွတ်တော့မယ် …. ကိုယ်ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ စပိုက်ဒါမန်း ဇာတ်ကားထဲကအတိုင်း အုတ်နံရံကို အသကုန်ကုတ်ကပ်ကာ တက်ပီးကြည့်လိုက်မိသည်။ မြင်ကွင်းက မယုံနိုင်စရာ သောက်ကျိုးနဲ ဟားးးးး “သားလေး..မေမေ့ဆီလာ…မေမေ အီအီး … Read more
ဒီလိုမွန်မြတ်လှ တဲ့ အလှူမျိုး ကိုမှ သာဓုမခေါ် ရင် ဘယ်လိုအလှူမျိုးကို သာဓုခေါ်မလဲ
ဒီလိုမွန်မြတ်လှ တဲ့ အလှူမျိုး ကိုမှ သာဓုမခေါ် ရင် ဘယ်လိုအလှူမျိုးကို သာဓုခေါ်မလဲဗျ ခြေတစ်ဖက်ပြတ်နေပေမယ့် မိဘကိုထီရောင်းကျွေးနေသူအား ဆိုင်ကယ်လှုဒါန်း ကိုမျိုးထွန်းကအသက်က၃၆နှစ် လွန်ခဲ့တဲ့၂၀၀၄ခုနှစ်ကသဲကားကကြိတ်သွားလို့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုမျိုးထွန်းကစိတ်အားမလျော့ပဲရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်အစုတ်လေးနဲ့ပိုက်ဆံနှစ်သိန်းအတိုးနဲ့ချေးကာထီရောင်းပြီးမိဘကိုလုပ်ကျွေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စီးတဲ့ဆိုင်ကယ်ကခဏခဏပျက်နေလို့ တစ်ခါတစ်လေအိမ်ပြန်ဖို့တောင်သူ့ညီကိုလာခေါ်ခိုင်းရပါတယ်။ လားရှိုးလေးရှမ်းထမင်းဆိုင်ကညီလေးသန့်စင်က သူမစီးဖြစ်တော့တဲ့ ၁ယ ဂျပန်ဆိုင်ကယ်လေးကိုလှုချင်တယ်ဆိုလဲ ကိုမျိုးထွန်းကိုခေါ်ပြီးလှုပေးခဲ့ပါတယ်။ မသန်ပေမယ့်စိတ်အားမလျော့ပဲ မိဘကိုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ကိုမျိုးထွန်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ တစ်လကိုထီဆယ်စောင်တွဲလာလာပို့ခိုင်းပြီးအားပေးနေပါတယ်။အမျိုးတွေလဲသူ့ထီတွေကိုအားပေးချင်ရင် သူ့ဖုန်းနံပါတ် 09797123989ကိုဆက်ရင်သူလာပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ ONE TO ONE လူနာကူညီရေး ကိုဝမ်း ဖုန်း ၀၉၇၆၅၇၆၅၁၇၉ မန္တလေးမြို့ —————————– Unicode ခွတေဈဖကျပွတျနပေမေယျ့ မိဘကိုထီရောငျးကြှေးနသေူအား ဆိုငျကယျလှုဒါနျး ကိုမြိုးထှနျးကအသကျက၃၆နှဈ လှနျခဲ့တဲ့၂၀၀၄ခုနှဈကသဲကားကကွိတျသှားလို့ခွထေောကျတဈဖကျဖွတျလိုကျရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ကိုမြိုးထှနျးကစိတျအားမလြော့ပဲရှိတဲ့ဆိုငျကယျအစုတျလေးနဲ့ပိုကျဆံနှဈသိနျးအတိုးနဲ့ခြေးကာထီရောငျးပွီးမိဘကိုလုပျကြှေးနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့စီးတဲ့ဆိုငျကယျကခဏခဏပကျြနလေို့ တဈခါတဈလအေိမျပွနျဖို့တောငျသူ့ညီကိုလာချေါခိုငျးရပါတယျ။ လားရှိုးလေးရှမျးထမငျးဆိုငျကညီလေးသနျ့စငျက သူမစီးဖွဈတော့တဲ့ ၁ယ ဂပြနျဆိုငျကယျလေးကိုလှုခငျြတယျဆိုလဲ ကိုမြိုးထှနျးကိုချေါပွီးလှုပေးခဲ့ပါတယျ။ မသနျပမေယျ့စိတျအားမလြော့ပဲ မိဘကိုလုပျကြှေးနတေဲ့ကိုမြိုးထှနျးကိုဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ တဈလကိုထီဆယျစောငျတှဲလာလာပို့ခိုငျးပွီးအားပေးနပေါတယျ။အမြိုးတှလေဲသူ့ထီတှကေိုအားပေးခငျြရငျ သူ့ဖုနျးနံပါတျ 09797123989ကိုဆကျရငျသူလာပို့ပေးပါလိမျ့မယျ။ ONE … Read more